? => C6H12O6 (fructose) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = C6H12O6 | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 6 helay
n 1 n Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta nH2O + (C6H10O5) n → nC6H12O6
Waa maxay xaalada falcelinta ee H2O (biyaha) ay kaga falceliyaan (C6H10O5)n ()?
Heerkulka: heerkulka Xaaladda Kale: H2SO4
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C6H12O6 (fructose)?
Ku shub 1 koob oo cudbi ah galaas 70% ah xalka H2SO4, kululee oo walaaq ilaa inta laga helayo xal isku mid ah
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan (C6H10O5) n ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada nH2O + (C6H10O5) n → nC6H12O6
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (C6H10O5) n ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (C6H10O5)n ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (C6H10O5) n () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xiriira badeecada C6H12O6 (fructose)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C6H12O6 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O6 (fructose) alaab ahaan?
biyaha sukrose fructose fructose
(lng) (dd) (dd) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2O + C12H22O11 . C6H12O6 + C6H12O6
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ay kaga falceliyaan C12H22O11 (sukrose)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C6H12O6 (fructose) iyo C6H12O6 (fructose)?
Ku dar xalka saccharose tuubada baaritaanka, ku dar dhibic H2SO4, kululeyso 2-3 daqiiqo
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan C12H22O11 (sukrose)
Dareen-celinta muraayadda ayaa dhacday. marka kuleylka xalka leh asiidh ahaan wax soo saare ahaan, saccharose waxaa lagu kaydiyaa si loo soo saaro glucose iyo fructose. Qaab dhismeedka Fructose wuu ka duwan yahay gulukoosta. Fructose way ka macaantahay gulukooska. Dareen-celinta hiddo-wadaha ayaa sidoo kale ku dhacda ficil-celinta enzyme heerkulka caadiga ah
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2O + C12H22O11 . C6H12O6 + C6H12O6
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee C6H12O6 (sukrose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O6 (fructose) alaab ahaan?
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) waxay la falgalaan C12H22O11 (saccharose)?
Heerkulka: t0 Xalka: bislaado
Hydrolysis-ka saccharose ee deegaanka aashitada
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan C12H22O11 (saccharose)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga C6H12O6 (fructose), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda C12H22O11 (saccharose), la waayey
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta C12H22O11 (saccharose)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C12H22O11 (saccharose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C12H22O11 (saccharose) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C6H12O6 (saccharose)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O6 (fructose) alaab ahaan?
1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta HCHO → C6H12O6
Waa maxay xaaladda falcelinta HCHO ()?
Xalka: Ca (OH) 2
Dhacdo ka dib HCHO ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada HCHO → C6H12O6
biyaha carbon dioxide fructose Oxygen
6 6 1 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6H2O + 6CO2 . C6H12O6 + 6O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ay la falgalaan CO2 (carbon dioxide)?
Xalka: chlorophyll Xaaladda Kale: light
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C6H12O6 (fructose) iyo O2 (oxygen)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan CO2 (carbon dioxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6H2O + 6CO2 . C6H12O6 + 6O2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee C6H12O6 (kaarboon laba ogsaydh)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C6H12O6 (fructose) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (carbon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?